Cajal: Isticmaalka Macluumaadka Macluumaadka Shabaqa ah - Ha Iska Jirin!
Marka aanad heli karin xogta looga baahan yahay webka, waa siyaabo kale oo qofku u isticmaali karo si uu u helo arimaha loo baahan yahay. Tusaale ahaan, mid ayaa ka heli karta xogta ka timid APIs-ku-saleysan, ka soo qaad xogta laga soo qaaday PDF-yada kala duwan ama xitaa laga soo bilaabo bogaga shabakada lagu qoro. Extracting data from PDFs waa hawl culus sida PDF badanaa kuma jiraan macluumaadka dhabta ah ee laga yaabo inay u baahdaan. Dhinaca kale, inta lagu guda jiro habka sawir-qaadidda, waxyaabaha la soo saaro waxaa lagu qaabeeyaa koodh ama iyadoo la adeegsanayo adeegga tamarta. Helitaanka xogta shabakada shabakada waxay noqon kartaa shaqo adag, laakiin marka qofku leeyahay fikrad ah waxa loo baahan yahay in la sameeyo, markaa way fududahay.
Macluumaadka mashiinka la akhriyi karo
Mid ka mid ah yoolalka ugu muhiimsan ee shabakadda duubista waa inay awood u yeeshaan helitaanka xogta mashiinka la akhriyi karo - percorso sensoriale per disabili. Macluumaadkan waxaa abuuray kombiyuutar lagu shaqeynayo, qaar ka mid ah tusaalooyinkooda waxaa ka mid ah XML, CSV, faylasha Excel, iyo Json. Macluumaadka mashiinka la akhriyi karo waa mid ka mid ah siyaabaha kala duwan ee loo isticmaali karo si loo helo xogta webka maaddaama ay tahay hab sahlan oo uma baahna heer sare oo farsamo si looga shaqeeyo.
Bogagga bogagga waa mid ka mid ah qaababka ugu badan ee loo isticmaalo helitaanka macluumaadka loo baahan yahay. Waxaa jira mararka qaarkood marka bogagga aan si fiican u shaqaynayn.
Inkasta oo duubista webka ay aad u doorbidaan, waxaa jira arrimo kala duwan oo ka dhigaya xoqitaanka dhibka badan. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah HTML-code kaas oo si xun loo qaabeeyey iyo xirmid xadidan. Caqabada sharci ayaa sidoo kale noqon kara arrin ah in la xakameeyo xogta webka iyada oo ay jiraan dad qaar iska indha tiraya isticmaalka liisamada. Dalalka qaar, tan waxaa loo tixgeliyaa inay noqotey mid darxumo leh. Qalabka kaa caawin kara xoqidda ama soo saarida macluumaadka waxaa ka mid ah adeega webka iyo kordhinta taraafeetada iyadoo ku xiran aaladaha shabakada loo isticmaalo. Xogta shabakada bogga waxaa laga heli karaa Python ama xitaa PHP. Inkasta oo geedi socodku u baahan yahay xirfado badan, way sahlanaan kartaa haddii website-kan uu isticmaalaayo uu yahay mid sax ah.